Fifanarahana loharanom-bola amin'ny rongony New Jersey - Mpisolovava amin'ny indostrian'ny rongony - Mpisolovava amin'ny orinasa marihuana manana fahazoan-dàlana
Inona avy ireo fifanarahana loharanom-bola ao amin'ny New Jersey Cannabis?
Ny fifanarahana loharanom-bola eo ambanin'ny lalàn'ny rongony New Jersey dia fifanarahana izay misy fehezan-dalàna sy fiarovana amin'ny lalàna mifehy mba hiarovana ireo mpangataka laharam-pahamehana tsy ho voarebireby na hararaotin'ny mpampiasa vola manankarena izay mety manandrana manararaotra ny laharam-pahamehany. Ireo mpangataka laharam-pahamehana dia omena fiarovana sy safidy betsaka araka ny lalàna momba ny fanamafisana rongony New Jersey. Mpangataka maro izay mahazo fahazoan-dàlana no ho mpangataka laharam-pahamehana, ary ny fifanarahana loharanom-bola izay ampiasain'izy ireo dia hiaro azy ireo mba hahafahan'izy ireo mitazona ny harem-pirazanana ary tsy azon'ny mpampiasa vola amin'ny fifampiraharahana amin'ny endriny.
Ahoana ny fomba ahazoan'ny mpangataka laharam-pahamehana tombony amin'ny fifanarahana loharanom-bola
Ireo mpangataka laharam-pahamehana dia hahazo fahazoan-dàlana marobe amin'ny rongony any New Jersey satria tanjon'ny lalàna ny hampihenana ny sakana tsy hidirana ary hanome ny laharam-pahamehana ireo mpangataka amin'ny vondrona manokana. Ireo vondrona mahazo laharam-pahamehana dia ahitana:
Orinasa manana mari-pahaizana vitsy an'isa voamarina
orinasa manana vehivavy voamarina
Orinasa manana veterana manana mari-pahaizana voamarina
Orinasa fananana Equity ara-tsosialy
orinasan'ny faritra misy fiantraikany
Ireo mpangataka laharam-pahamehana ireo dia hamerina hijery ireo fangatahana fahazoan-dàlana ho an'ny rongony ara-dalàna amin'ny fepetra ahazoana alalana voalohany amin'ny fahazoan-dàlana. Ny fangatahana fepetra dia mitaky fepetra ara-bola sasany ho an'ny fidiram-bola ambany. Midika izany fa ny ankamaroan'ny fangatahana fepetra dia mitaky fifanarahana loharanom-bola.
Raha mila fanampiana amin'ny fifanarahana loharanom-bola - Kitiho eto.